Robert Louis Stevenson. Chirangaridzo cherufu rwake. Mabhuku ake asingafi | Zvazvino Zvinyorwa
Robert Louis Stevenson. Chirangaridzo cherufu rwake. Mabhuku ake asingafe
Zadziswa izvozvi Makore 123 mushure mekufa kwe Munyori weScotland Robert Louis Stevenson pachitsuwa cheSamoa. Tuberculosis yakamutora kumakore makumi mana nemana, asi akairarama zvakanyanya uye nemitambo yakawanda seiya inorondedzerwa mumanovels ake. Izvo uye zvicharamba zviripo mumwe wevanyori vakakurumbira uye vanoyemurwa zvenyika.
Treasure Island, Iyo Nhema Museve, Iyo Inoshamisa Nyaya yaDr Jekyll naMnu Hyde, kana imwe yeutera hwangu inova Ishe weBallantrae… Mazita ezvinzvimbo ayo isu tese takaverenga kana kuona mukugadziriswa kwemafirimu, ngano uye nyaya zvavo hazvifi. Ini ndinoongorora dzimwe dzadzo semubhadharo wekuzvininipisa kune anonyanya kuve anonyanya kushamisa munyori munyika yeAnglo-Saxon.
1 Pfuma chitsuwa
2 Scottish nyaya
3 Murume akapfeka nhema
4 Museve mutema
5 Nyaya Yakajairika yaDr.Jekyll naMnu Hyde
6 Dhiyabhorosi ari muhombodo nedzimwe nyaya
7 Ishe weBallantrae
Yakabudiswa muLondon muna 1883. Yakareba John Silver, Jim Hawkins, Captain Flint, Billy Bones, Nhema Imbwa, Ben Gunn, Knight Trelawney, Captain Smollet kubva Hispaniola… Mazita akagadzwa zvachose mundangariro yedu yekuverenga. Imwe yeangu ndangariro ekutanga enhoroondo ino inomira kuverengera chimwe chezvimedu zvacho, nhaurirano naBen Gunn, mukuyera kwekuverenga kwekunzvera kweimwe bvunzo dzepfungwa dzatakapihwa kuchikoro.
Gare gare vamwe vazhinji vanobatana neni kubva pakuiverenga mukati evana, vakuru, echirungu edhisheni, uye nekuzviona mune zvakawanda zvinogadziriswa kana makatuni. Nzira yangu yepedyo kusvika pakuiswa kwayo, vhiki ina dzandakapedza ndiri muBristol rimwe zhizha ndichiyedza kufungidzira kuti ingadai iri imba yevaeni. Admiral Benbow o Spyglass, John Silver's Tavern. Nyaya yekusingaperi yekusangana.
Nhau shanu dzakaiswa muScotland dzinounzwa pamwechete muiri vhoriyamu.
Mbavha yemuviri inotarisa pamazuva ekuvandudzwa kweAnatomy sesainzi, apo dzimba dzekudzidzira padzinoda zvitunha, uye matsotsi asina hunhu akapamba makuva.
Yakakombama janet Iyo inyaya yehuroyi uye kubata, uye inotaurira kushungurudzwa uko kwakakomba mupristi weparishi reguta reScotland, akasungirirwa mukutenda mashura kwekare.
En Varume Vanofara chiitiko chacho chakaiswa pamhenderekedzo yekuchamhembe kweScotland, uye inotiudza kutsvaga kwepfuma yegoroni reSpain rakaparara
Denda repamba Zvinotitorera kuimba yepazasi panogara chakaipa chechimiro chisingazivikanwe.
Iyo pavilion yeZvibatanidza uko mutengesi akadzingirirwa neItaly Carbonari uyo anoda mari yakawanda kubva kwaari anovanda mumuzinda maakakombwa.
Iyi pfupi nyaya inoonekwa seimwe yehunyanzvi hwake, asi hazvizivikanwe zvishoma nekuda kwekuoma kwekuzvishandura nekuti zvakanyorwa mumutauro weScotland. Kune rima rakanyanya neiyo nharaunda yekumaruwa iyo Stevenson ainyatsoziva uye uye kwaive kwakaitwa huso hwakanyanya miedzo yevaroyi.
Yakatanga kubudiswa senhau rose 1883. Gara mu England yeMiddle Ages inoitika panguva Hondo yeVaviri Roses uyo akakwenenzvera dzimba dzeLancaster neYork kukorona yenyika. Anotaura nyaya ya Dick shelton, uyo, mushure mekutiza mhondi dzababa vake, anowana hutiziro pakati pevapambi ve boka remuseve mutema, ndiani achamubatsira mukutsiva kwake.
Nyaya Yakajairika yaDr.Jekyll naMnu Hyde
Uyu kapfupi novel ndeimwe yemabasa ake makuru uye uko Stevenson akabata nenyaya yakamunetsa muhupenyu hwake hwese: huviri hwehunhu hwevanhu. Akamuisa mumoyo we Victorian london uye zvakateedzana zvezvipupuriro kubva kuzvapupu zvakasiyana siyana zvine chinangwa chekuzarura chakavanzika. Jekyll naHyde inhengo yakaparadzaniswa muzviviri. Hyde hunhu hwaJekyll hwakaipa uye hunomiririra kuzvidzora-uipi, iyo, kana yangosunungurwa, haigoni kudzora. Uye kwandiri Jekyll naHyde vacharamba vaine huso hwechikara ichocho chemu cinema chaive Spencer tracy.
Dhiyabhorosi ari muhombodo nedzimwe nyaya
Uku kuunganidzwa kwe shanu nyaya inosanganisirawo Miviri inobvuta; Markheim, , que chidzidzo chepfungwa chekurwa pakati pezvakanaka nezvakaipa; Olala Iyo inyaya yerudo ine theme ye lycanthropy kumashure; Falesá pamhenderekedzo Iyo inyaya yekushamisika ine yekufungidzira kutarisa uye Dhiyabhorosi ari muhombodo inodzokorora ngano yekufananidzira muSouth Seas.
Imwe yemabhuku akajeka. Akatanga kuzvinyora muna 1887 mutaundi riri pamuganhu pakati peUnited States neCanada, ndokuzvipedza makore maviri gare gare muWaikiki, chitsuwa chine zuva muSouth Seas. Iyo novel, inokurudzirwa nehupenyu hwekufamba hwaStevenson, inotenderera marongero akasiyana siyana, nharaunda, makore nenyika.
Iyo nyaya yevanakomana vaviri vaIshe Durrisdeer, kune avo vakatarisana nedanho, zvematongerwo enyika uye rudo, vaive neyakajairika mafirimu mu 1953 firimu nyeredzi Errol Flynn, imwe ngano yezvakanakisa zviitiko zveiyo huru skrini.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Robert Louis Stevenson. Chirangaridzo cherufu rwake. Mabhuku ake asingafe
"Star Wars Anthology" yakatemwa edition na Planeta Cómic
Vanyori vakazvarwa muna Zvita. Mamwe emazwi ake ezuva nezuva